ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရကို လေ့လာခြင်း (၃) - Kantarawaddy Times
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရကို လေ့လာခြင်း (၃)
ယာယီကုန်တင်ယာဥ်ရပ်နားစခန်းတွင် ယာဥ်မောင်းနှင့်ယာဥ်နောက်လိုက်ထံမှ ကိုဗစ်ပိုးထပ်မံတွေ့ရှိ၍ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ ၂၁ ဦးထိရှိလာ
Kantarawaddy Times - November 26, 2020 0
ကန္တရဝတီတိုင်း(မ်) ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့အဝင်ရှိ ဝါရီကောခူ(အထက)ကျောင်း ယာယီကုန်တင်ယာဥ်ရပ်နားစခန်းတွင် ယာဥ်မောင်းနှင့် ယာဥ်နောက်လိုက်များကို COVID-19 Antigen Rapid Diagnostic Test (RDT) ဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ယာဥ်မောင်းတစ်ဦးနှင့်ယာဥ်နောက်လိုက်တစ်ဦးထံမှ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကယားပြည်နယ် ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် ဆောင်ဒူလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပတိုငံကျေးရွာရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှာ စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အမျိုးသား ၄ ဦးက ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီး ဂူအတွင်းပစ်ချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့မ ရဲစခန်းမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။
(ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ တစ်နှစ်ကျော်ကာလကို လေ့လာခြင်း)
၂၀၁ရ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တစ်နေရာလစ်လပ်မှုကို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသားများသာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြ၍ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ထူးခြားချက်မှာ ယခုအချိန်အထိ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးမှ မပါဝင်သေးခြင်းပေ။ (ပထမအကြိမ်တွင်လည်း မပါခဲ့ပါ ။)
ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် တစ်နှစ်ကျော် ( ၁ရ လ ကျော် ) အတွင်း ပုံမှန် အစည်းအဝေး ( ၆ ) ကြိမ်ကို နှစ်လကျော် သုံးလနီးပါးမှ တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။ ဘယ်အကြိမ်မျှ သုံးရက်ထက် ပိုမကြာခဲ့ပေ ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဆဋ္ဌမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှသာ ကယားပြည်နယ်၊ ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဥပဒေအား ပထမဆုံး ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည် ။
၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂ဝ – ၂၁ ) နှစ်ရက် ကျင်းပခဲ့သည့် ဆဋ္ဌမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးအပြီး တစ်လကျော်ကာလအတွင်း သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ( ၂၉ ) ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူနေခြင်းကို တွေ့ရသည် ။ ယခင်ထက်တော့ လ အရေအတွက် လျော့ကျနီးကပ် လာသည်ကို တွေ့ရှိကြိုဆိုသော်လည်း ရက် မည်မျှကြာအောင် ကျင်းပမည်ကို စောင့်ကြည့်ရပေမည်။
ထို့အပြင် ပထမအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ပြည်နယ်ဥပဒေ ( ၉ )ခု ကို လက်ရှိကာလနှင့် ကိုက်ညီအောင် မည်မျှ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ပယ်ဖျက် နိုင်မည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရ ပေမည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ပြည်နယ်သူ/သားများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပေသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူလူထုများနှင့် ယခုထက် ပိုမိုတွေ့ဆုံရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့မှသာ မကိုက်ညီသည့် ပြည်နယ်ဥပဒေဟောင်းများကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ပယ်ဖျက် နိုင်၍ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသော ပြည်နယ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် ပြည်နယ်ဥပဒေအသစ်များ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
(ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၏ တစ်နှစ်ကျော်ကာလကို လေ့လာခြင်း)
ကယားပြည်နယ် အစိုးရသစ်၏ တစ်နှစ်ကျော်ကာလ ၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ မေလတွင် NGOs, INGOs, CSOs အဖွဲ့များအား ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်ကိစ္စ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် တည်ဆဲဥပဒေများကို ကျော်လွန်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ( ၆ . ၅ . ၂၀၁ရ ) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄/ ရ – ၂၃၅/ ဦး ၅ ဟု ရည်ညွှန်းချက်ပေး၍ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများသို့ ၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၁၁ ) ရက်နေ့တွင် စာထုတ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ လွိုင်ကော်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ၂၀၁ရ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၁ရ ) ရက်နေ့စွဲဖြင့် အသင်းအဖွဲ့များသို့ ပို့ပါသည်။ ( စာမရောက်သည့် အသင်းအဖွဲ့များလည်း အများအပြား ရှိနေဆဲဟု မေးမြန်း သိရှိရသည်။ )
သက်သေဖော်ပြရန် ပေးသည့် အသင်းအဖွဲ့၏ အမည်မပါရန် စာအပေါ်ပိုင်း ချန်လှပ်ထားပါသည်။
စာအရ ကယားပြည်နယ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ်များတွင် အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ( ၁ဝ ) ရက် ကြိုတင် တင်ပြသွားရန်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်စေရေးတို့ပါဝင်ရာ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ လက်ထက်တွင် အလွန်ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များ ( CSOs ) ကိုပါ ထည့်သွင်း ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း ( ၈ ) နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ အခန်းပါ ပုဒ်မ ၃၅၄ အရ လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးများကို ပိတ်ပင်ရာ ရောက်နေပေသည်။
ပုဒ်မ ၃၅၄ တွင်​-
( က ) မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့် ၊
( ခ ) လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ၊
( ဂ ) အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်းအရုံးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့် ၊
( ဃ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အချင်းချင်းကိုလည်းကောင်း၊ အခြားဘာသာသာသနာကိုလည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဘဲ မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာသနာနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်။တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၁ အဖြစ် ပြဌာန်းသည့် အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ တွင် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များ ( CSOs ) သည် ဆန္ဒအလျောက် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ဟုသာ ပါဝင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်ရန် ဆန္ဒမရှိပါက မှတ်ပုံမတင်ဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသည်။ ကန့်သတ်ချက်များ မပါဝင်ပါ။
ထို့အပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၈ အဖြစ် အသစ် ပြဌာန်းသည့် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်း အခွင့်အရေးတို့ကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်လိုသော နိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိသဘောထားဆန္ဒကို ဖော်ပြရန် အလို့ဌာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံ ဆောင်ရွက်မည့်နေ့မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ ကြိုတင်၍ စာဖြင့်ပေးပို့တင်ပြရမည် ဟုသာ ပါဝင်သည်။ ခွင့်ပြုချက် မလိုဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ယုတ်စွအဆုံး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၁ အဖြစ် ပြဌာန်းသည့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ တွင်လည်း ပွဲများကို ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတဆင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အသိပေးတင်ပြပြီး တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ ကျင်းပနိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ကြိုတင် ရက် ကန့်သတ်ချက် မပါဝင်ပါ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ တည်ဆဲဥပဒေများကို ကျော်လွန်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် အဖြစ် လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူအနေဖြင့် ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်သင့်သော အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
Previous articleနှမ်းဈေးမကောင်းမည်ကို ဒေါတမကြီးအုပ်စုထဲမှ တောင်သူများ စိုးရိမ်ကြ
Next articleနှစ်ဦးနှစ်ဘက်တည်း ဆုံးဖြတ်၍မရသော ကိစ္စများဖြစ်သောကြောင့် ကျန်သည့် ၄ ချက်ကို မဖြတ်ရသေးဟု DPN ခေါင်းဆောင်ပြော
ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ လွှတ်တော်ကော်မတီမှတဆင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတင်ပြတောင်းဆို
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းဆွေးနွေးကြပြီး ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှတဆင့် တင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ LAIN နည်းပညာပြုအထောက်အကူအဖွဲ့မှ ကိုကျော်ထင်အောင်ကပြောပါတယ်။ “အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့ချင်းသော်လည်းကောင်း စုပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း လွှတ်တော်...